အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အမည်မဲ့ ပိတောက်ပန်းကလေးများ
16 Responses to “အမည်မဲ့ ပိတောက်ပန်းကလေးများ”
သင်္ကြန်အချိန်ခါမှာ အမှတ်တရရှိစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက...
ကျမအတွက်တော့ ကြေကွဲခြင်းတွေစုပုံထားတဲ့ မျက်ရည်သင်္ချိုင်းတစ်ခုပါပဲ...
(အကြံချင်း တူတယ် မချောရေ.. ညီမလည်း မနှစ်က ပို့စ်ကိုပဲ ပြန်တင်လိုက်တယ်)
Thank you Chaw, guess you be busy and happy during the trip!Take care!
စာလေးတွေဖတ်ဘို့ ထားခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါချောရေ.
မြန်မာပြည်က သင်္ကြန်ကို ခံစားမဲ့သူမှ ရှိပါဦး မလား။
ဒီနှစ် CCTv နဲ့ ဆိုတော့
ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး သင်္ကြန်နဲ့ အထီးကျန်ခြင်းဆိုတာ တွေးမိသွားတယ်၊ ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေက တစုံတယောက်ကို ပျော်စေသလို အိမ်ရှင်မရှိတဲ့ အိမ်လေးမှာလည်း လာလည်သူတွေနဲ့ စည်ကားလျက် ပါပဲ၊း) အိမ်ရှင်က ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စီစဉ်ခဲ့လို့လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်၊
လေ ထဲ ပျောက်..။
သင်္ကြန်မှာ လာနှုတ်ဆက်မလို့ ..။
ပိတောက် ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ကြုံရင်း
တစ်နှစ်တစ်ခါပွင့်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့ ပိတောက်ပန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်ရလို့ကျေးဇူးပါနော်။
ချမ်းသာပြီး အထီးကျန်နေရတာထက် ဆင်းရဲပြီး သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေရတာက ပို ပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ အဲဒီအမျိုးသမီးကို သနားပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ သူတို့အမေအကြောင်း စဉ်းစားတတ်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ အရွယ်က ငယ်သေးတာကိုး။